फेरी पनि दलितमाथी आरोप ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
गत जेठ ११ गते विहानै रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ मा अन्तरजातिय प्रेमकै कारण एक दलित युवाको हत्या भएको समाचार सुनियो । आफु हुर्किएको, खाए खेलेको, पढे लेखेको नगरपालिकामै अपत्यारिलो घटना भएको सुन्दा मन थाम्न सकिएन । मेरो सम्पर्कमा रहेका धेरै साथिहरुले तपाई जिल्लामा त यस्तोसम्म भएछ नी भनेर प्रसंग कोट्यान थाले । नियमित सम्वाद भइरहने जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुसंग कुरा गरे । तथाकथित माथिल्लो जातको किशोरीसंगको प्रेमलाई बैधानिकता दिन खोज्दा गरिएको नरसंहारका अगाडि लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त गणतन्त्र फिका भैदियो । आजको राजनीतिक परिवर्तनका लागि मेरा अग्रज र स्वय्म मेरो पुस्ताले धेरै ठुलो त्याग, तपस्या र बलिदानी व्यहोरेको छ । तरपनि समाजमा जातभात, छुवाछुत र कुसंस्कार जीवतै रहेछ । आजपनि सदयौँ देखि गरिबी र अशिक्षाको पासोमा पर्दै आएका दलितहरुमाथी जघन्य अपराध हुने क्रम रोकिन सकेको छैन । चौरजहारीमा गरिएको सामुहिक हत्याकाण्डका विपक्षमा सिंगो देश उभिएको छ । तरपनि कतिपय मानिसहरु यो घटनालाई सामान्य झडपका रुपमा अथ्र्याउने कोशिस गरिरहेका छन् । अपराधलाई कालो पर्दाले छोप्न उनिहरुले विभिन्न किसिमको आरोप लगाउन खोजिरहेका छन् । घटनालाई सरसर्ति हेर्दा ती आरोपहरुलाई पुष्टि गर्ने आधार भने कदापी भेटिदैन ।
घटनास्थल चौरजहारीको सोति गाउँ र मृतक नवराज बिकको गाउँ जाजरकोटको भेरी नगरपालिका आमुन्ने सामुन्ने अवस्थित छन् । जिल्ला फरक भएपनि भेरी भेगका मानिसहरुको लवज, संस्कार, रितिरिवाज सबै एकै किसिमको छ । घटनामा हत्या गरिएका नबराज विक, गणेश बुढा, टिकाराम सुनार र लोकेन्द्र सुनार लगायतका युवाहरुमाथी कतिपय मानिसहरुले रक्सी, गाँजा सेवन गरेर स्थानीय मानिसहरुमाथी हातपात गरेको, लकडाउन उलङघन गरेको जस्ता आरोपहरु लगाएका छन् । यि आरोपहरु सर्वदा मिथ्यापुर्ण, तथाकथित माथिल्लो जात भएको र सक्तामा आफ्नो पकड रहेको कुत्सीत मानसिकताबाट ग्रसित छन् ।
पीडितमाथी लागुऔषध सेवनको आरोप !
आफ्नो प्रेमिका लिन गएका युवाहरुले रक्सी र लागुपदार्थ सेवन गरेको कुरा अहिलेसम्म कसैले पनि पुष्टि गर्न सकेको छैन । मृतक तिनै जनाको शब पोस्टमार्टमको रिपोर्ट नआउँदै उनिहरुमाथी यस किसिमको आरोप लगाइनु अत्यन्तै निकृष्ट कार्य हो । सत्यलाई बंग्याएर नशाको मातमा स्वयं उनिहरुले नै झडप निम्त्याएको तर्क गर्न यस्तो झुठो तर्क गरिएको हो । आमासँग बुहारी लिन जान्छु भन्दै घरबाट निस्किएका नवराजले रक्सी सेवन गरे होलान् भनेर कसले पत्याउँछ ? भेरी नदिको किनारमा तैरिरहेको नवराज, टिकाराम र गणेशले लगाएको कपडामा भाङ भेटियो भनिदैछ । न त यस विषयमा घटना घटिरहेकै बेला सँगै रहेको प्रहरीले बताएको छ न पोस्मार्टम रिपोर्टबाट पुष्टि नै भएको छ । यो सुन्दा छोरा गुमाएर भावविह्वील बनेकी नवराजकी आमा उर्मिलालाई कस्तो महसुश भइरहेको होला ? मानवीय संवेदनाहिन मानिसहरुले शुरु गराएको हल्लाले पीडितहरुको चहराईरहेको घाउमा नुन खुर्सानी छर्किए जस्तै भएको छ । यस विषयमा प्रहरीले समयमै अनुसन्धान गरी कुप्रचार गर्नेमाथी पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
बाल विवाहको दण्ड हत्या ?
नवराज विकको प्रेमिका भनिएकी किशोरी सुष्मा मल्लको उमेर नपुगेकोले मात्रै परिवारले उनिहरुलाई विवाह गर्न नदिएको तर्क पीडक पक्षको छ । बाल विवाहको साहारामा अन्तरजातीय विवाहलाई नकार्ने सोच मल्ल परिवारमा देखिन्छ । घटना हुनुभन्दा पहिलो पनि चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्लको प्रभावमा प्रहरीले उनिहरुले एकआपसमा सम्पर्क नै गर्न नपाउने गरी कागज गराएर छोडेको छ । सोही क्रममा नवराज एक रात प्रहरी हिरासतमा बसेका तथ्य पनि सार्वजनीक भएको छ । प्रहरीको काम बिहे भएपछि कानुन अनुसार वाल विवाहको मुद्धा अघि बढाउने हुनुपर्थ्यो । बिडम्बना स्वयं प्रहरीको व्यवहारले दलित र गैर दलित बीच बिहे हुन नदिने गरी भुमिका खेलेको देखिन्छ । अर्को घटना घटिरहेकै बेला घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले घरेलु हतियार सहित करिब एक सय जनाको संख्यामा रहेका गाउँलेहरुलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो दशैमा मार हान्दा बिच्किएको राँगोलाई लखेटे जसरी पीडित युवाहरुलाई लखेट्न दिईरह्यो । सायद त्यहाँ उपस्थित प्रहरीलाई थाहा थियो, वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्लको सम्बन्ध स्थानीय सरकार प्रमुखदेखि केन्द्रसम्मकै नेताहरुसम्म छ । त्यतिबेला वडा अध्यक्षको समुहलाई नियन्त्रण गर्दा आउने सम्भावित परिणामबाट प्रहरी प्रभावित भएको देखिन्छ । यदी प्रहरीले चाहेको भए विभिन्न झडप नियन्त्रणका विधिहरु प्रयोग गरेर यस किसिमको मानवता विरुद्धको अपराधलाई रोक्न सक्थ्यो ।
नेकपा र जनप्रतिनीधिको विवादित भूमिका ;
स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वको भुमिका पनि विवादित छ । रुकुम पश्चिमको ‘ख’ बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष गोपाल शर्माले निकालेको विज्ञप्ती पनि गैरजिम्मेवार छ । शर्माले तीनको सामुहिक हत्या र तीन जना वेपत्ता भएको गम्भीर घटनाको छानविन गर्न पार्टीको तर्फबाट पार्टीभित्रैका दलित नेताहरुलाई राखेर छानविन समिति बनाए । सामुहिक हत्या जस्तो जघन्य अपराधको छानविन गर्ने काम राजनीतिक दलको होइन । राजनीतिक दलको कर्तव्य अपराधको छानविनमा सघाउने हो । तर उनले अहिलेसम्म आफ्नो विज्ञप्ती सच्याएका छैनन् ।
यस्तै, रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित सांसद तथा पुर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा बोल्दा जाजरकोटबाट आएका युवाहरु र स्थानीय बीच झडप भएको र झडप हुँदे जाँदा युवाहरुले भेरी नदिमा हाम फालेको तर्क गरेका छन् । के उनलाई प्राप्त विवरण सत्य छ ? सांसद त्योपनि जातीय भेदभावका विरुद्ध शुरु गरिएको जनयुद्धको एक सशक्त कमाण्डरले पीडकहरुलाई पक्ष पोषण गरेको जस्तो देखिने गरी सदनमा बोल्नु त्रुटि हो । आफ्ना कार्यकर्ता समेत रहेका वडा अध्यक्ष डम्बर मल्लहरुले दिएको सुचनालाई एकपटक पनि भेरिफाई नगरी सम्मानीत सदनमा बोल्नु गलत थियो । यसले पात्र फेरिएपनि निमुखा दलितहरुमाथिको भेदभाव कायमै रहेको संकेत गर्यो । यद्दपी घटनालाई राजनीतिकरण नगरियोस भन्ने उनको आग्रह जायज थियो । तर उनले झडपको मानसिकतामा आएका युवाहरुसंग कुनै न कुनै किसिमको हतियार हुनुपथ्र्यो । उनिहरुको कुटाईबाट स्थानीय कुनै एक जना पनि मानिस घाइते भएको प्रमाण सार्वजनीक हुनुपथ्र्यो । तर, झडपलाई पुष्टि गर्ने कुनै पनि आधार देखिदैन ।
चौरजहारी घटना केवल एउटा झडप मात्र थिएन, त्यो मानवता विरुद्धको अपराध हो । समग्र परिवर्तन विरुद्धको दुष्सहास हो । पचासको दशकमा नेपाली काँग्रेसको सत्तालाई समेत बिर्साउने बर्बरतापुर्ण जातिय नरसंहार हो । फरक यति हो, हिजो दलितहरुमाथी अन्याय हुँदा केवल दलितले मात्र आवाज उठाउँथे । तर आज दलितमाथी अन्याय हुँदा सिंगो देश र संसारभर छरिएका सारा नेपाली एकजुट भएका छन् । अपराध लुकाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अर्को, स्थानीय केहि मानिसहरुले रुकुमेली र जाजरकोट बीचको लडाईका रुपमा पनि यसलाई उभ्याउन खोजेका छन् । यस किसिमको प्रयास झन खतरनाक छ । जाजरकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र रुकुमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पुर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा मध्य को बढि न्यायको पक्षमा उभिन्छन भन्ने जिज्ञासामा पनि दुवै जिल्लाका बासिन्दाहरुमा उत्तिकै छ ।
स्थानीयका अनुसार घटनास्थल चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ को सोति गाउँ पनि शोकमा छ । केहि मानिसहरुले गरेको अपराधको जाँतोले सिंगो गाउँ र चौरजहारी नगरपालिकालाई नै बद्नाम बनाएको छ । स्थानीय धेरै मानिसहरु अपराधको पक्षमा अहिले पनि देखिदैनन् । बरु उनिहरु राज्यको तर्फबाट घटनास्थल र दसिप्रमाणहरु संरक्षण गर्ने तर्फ राज्यको ध्यान नगएकोमा चिन्तित छन् । पीडितहरुले दिएको जाहेरीका आधारमा २० जनालाई पक्राउ गरिएपनि घटनामा प्रयोग गरिएका घरेलु हतियार, घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरुको संरक्षण आदि कार्यमा राज्यले बेवास्ता गरेको देखिन्छ । घटनाबाट बाँच्न सफल युवाहरुको भनाई अनुसार करिब सय जना मानिसहरुले तीन तिरबाट उनिहरुलाई घेरा हालेका थिए । संलग्न सबैलाई किन पक्राउ गरिएन ? गृह मन्त्रालयले बनाएको अनुसनधान टोलि नपुगुञ्जेलसम्म प्रहरीले घटनास्थल सिल गर्नुपथ्र्यो । त्यसो गरिएको पनि देखिन्न ।
संक्षिप्तमा भन्दा, यस किसिमका घटनाहरुले हाम्रो सामु ठुलो चुनौति खडा गरेको छ । राजनीतिक परिवर्तन भयो । शासन व्यवस्था र शासकहरु फेरिए तर चेतनाको स्तर माथि उठेन । यसले देखाउँछ, राज्यले सामाजीक अपराधहरुमा मोलाहिजा गर्नुहुँदैन । भौतिक विकासले मात्र समाज हामिले चाहेको जस्तो शान्त, संवृद्ध र समातामुलक बन्न सक्दैन । अब भौतिक पुर्वाधारमा जस्तै सामाजीक चेतना अभिवृद्धिमा पनि लगानि गर्न आवश्यक छ । यस्ता घटनाहरु अनुसन्धान र नियमन गर्ने निकायहरुलाई राजनीतिको छायाबाट मुक्त बनाउनु पर्छ । नत्र फेरी भविष्यमा मुलुकले जातीय, सांस्कृतिक तथा धार्मिक युद्धको सामाना गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।